Fomba 6 hanatonana ny fiovan'ny toetranao miovaova ny sakaizanao - Fifandraisana
Ara-dalàna ny hatsembohana. Samy manana ny fotoana itiavantsika azy isika rehetra sosotra , tezitra, na cranky amin'izao tontolo izao tsy misy antony mazava. Indraindray ireo fihetseham-po ireo dia vokatry ny tsy fahampian'ny torimaso, hanoanana, hormonina, na satria fotsiny isika andro ratsy .
Na dia mahazatra ho an'ny olon-drehetra aza ny ho tezitra kely indraindray, ny olona sasany dia manana fiovan'ny toetr'andro matetika sy miovaova kokoa noho i Joe salantsalanao. Raha iray amin'ireo olona ireo ny vadinao, dia mety ho lasa mankaleo sy tsy mahafinaritra ny fiainana. Mety hahita ny tenanao mandeha eo ambonin'ny atody ianao ary manontany tena foana hoe rahoviana no hipoaka ny fipoahana manaraka. Mety hanontany tena ianao hoe ahoana no fomba hitantanana ny fiainana ambanin'ny tafo iray ihany miaraka amin'ny 'Jekyll sy Hyde.'
Ireto misy torohevitra vitsivitsy ho anao raha ny amin'ny fanatonana ny fiovan'ny toetran'ny namanao.
1. Fantaro raha mila fanampiana matihanina ilay namanao
Ny mpiara-miasa mikorontana ara-pientanam-po dia mety hanana olana lehibe toy ny fahaketrahana, ny tebiteby na ny fikorontanan-toetra mila fanampiana matihanina. Betsaka ny safidy azo atao raha ny amin'ny fitsaboana ny aretin-tsaina sy ny fahaketrahana.
Raha mino ianao fa manana olana tsy afaka alamina samirery ny vadinao, dia manomboha resaka momba ny fitadiavana fanampiana avy amin'ny mpanolotsaina, mpitsabo, na dokotera. Mety mila adihevitra mihoatra ny iray ny fandresen-dahatra ny sakaizanao hangataka fanampiana, fa aza kivy. Misy fomba sy toro-làlana omena izay afaka manatsara be ny kalitaon'ny fiainana sy ny olon-tianao.
2. Raiso ny andraikitrao amin'ny fihetsikao manoloana ny toe-tsainao
Efa nampitombo ny toe-tsain'ilay namanao ve ianao tamin'ny fihetsikao manoloana izany? Raha mampihetsi-po ianao amin'ny fihetsiky ny vadinao, dia azo inoana fa hiharatsy ny tarehin-javatra ratsyo. Ohatra, efa tezitra tamin'ny olon-tianao ve ianao satria sosotra izy ireo? Fanaon'ny olombelona ny mahatsapa izany, saingy mila mandray andraikitra ianao amin'ny fanehoan-kevitrao.
Mety tsy ho vitanao ny mifehy ny toe-tsain'ny namanao, fa afaka mitaona azy ianao raha tsy mifehy ny anao manokana. Ny filentehanao amin'ny fihetseham-ponao dia mety hahatsapa ho toy ny zavatra mety hatao, indrindra amin'ny hafanan'ny fotoana. Na izany aza, andramo ny mahatadidy fa ny fihetsikao dia manisy fiovana lehibe amin'ny halavany sy ny hamafin'ny fihetsiky ny vadinao.
3. Aza milalao ny lalaon'izy ireo
Tsy azonao fehezina ny fihetsiky ny namanao ka aza manandrana akory. Mifantoha amin'ny fifehezana ny anao ary milamina hatrany. Aza raisina manokana ny fiovan'ny toe-tsaina . Mikorontan-tsaina anao ny olon-tianao, saingy mety tsy misy ifandraisany aminao ny antony mahatonga ny fikorontanan-tsaina.
Matetika ny olona romotra dia manomboka mahazo fitsaboana tian'ny namany. Indraindray dia mora kokoa ny 'milavo lefona' na manao izay ilaina mba hampitsaharana ny toe-tsaina. Raha tafiditra ao ianao ny tantara an-tsehatra , dia hamporisika ny hatezerana bebe kokoa na amin'ny manaraka ianao amin'ny ho avy. Mety hisy, ny vadinao mitady valiny mampihetsi-po sy mampihetsi-po avy aminao. Raha manasaraka ny tenanao amin'ilay tantara noezahina namorona ny olon-tianao ianao, amin'ny farany dia tsy hisy faniriana maika hanomboka ny fihetsika tsy mahafinaritra amin'ny voalohany. Tsy dia miova ny olona raha 'valisoa' noho ny fitondran-tena ratsy.
4. Mamolavola paikady mialoha ny fotoana
Azonao atao ny mamantatra maodely matetika ny fiovan'ny toetran'ny namanao. Mety hahatsikaritra ianao mitarika sasany izay mitondra azy ireo na fanehoan-kevitra izay manatsara azy ireo na miharatsy kokoa. Ohatra, rehefa tezitra amin'ny olona iray aho dia tadiaviko ny fahazoan'ny vadiko fa tsy ny fanampiany. Fantany izany rehefa nandeha ny fotoana, ka tsy tokony hanome vahaolana (izay mahasosotra ahy fotsiny), dia hihaino fotsiny izy ary hampahafantatra ahy fa azony hoe nahoana aho no mahatsapa ny fahatsapako izany. Namolavola paikady mialoha izy. Azonao atao koa izany.
Angamba mila avela irery mandritra ny fotoana fohy ny olon-tianao na variana amin'ny fandaharana amin'ny televiziona tianao indrindra rehefa tonga ny fihetseham-po. Raha mbola tsy manome ianao na manome valisoa ny fihetseham-po, dia omeo azy ireo izay ilainy. Amin'ny fanaovana izany dia hahenao foana ny hamafin'ny fahatezerana sy ny faharetan'ny toe-po ratsy.
wwe nxt maka an'i New York
5. Diniho ny safidinao
Misy fotoan-tsarotra amin'ny fifandraisana rehetra. Na izany aza, raha mazàna ny sakaizanao ary tsy misy faharetana, fiaraha-miory na fitiavana toa manampy azy ireo, ary mijaly ny fiainanao noho ny fiovan'ny toetranao, dia mety mila manontany tena ianao raha mila an'ity olona ity amin'ny fiainanao ianao.
Rehefa avy nifandray tamina olona tsy dia salama foana ianao nandritra ny fotoana kelikely, dia fantatrao angamba hoe hanao ahoana ny fiainana. Raha ratsy toetra ara-pihetseham-po na ara-batana ny vadinao, dia mety ho fotoana fialana ity. Arakaraka ny maha haingana ny fanapaha-kevitra no tsara kokoa ho an'ny ankolafy rehetra. Na izany aza, raha misafidy ny hijanona ianao dia safidio ny ho tia na dia mandritra ny fiovan'ny toetranao aza. Andramo jerena sy tadidio ilay olona nitiavanao azy ary tadidio ny antony nahatongavanareo roa hatreto.
6. Tadidio fa handalo ny Mood
Ny fiovan'ny toetr'andro dia mihelina ihany. Izany no antony iantsoana azy ireo hoe 'swing'. Miezaha mahatadidy fa na dia mahatsiaro ho haharitra mandrakizay aza izy io. Ny lakileny dia ny mahita ny toerana falifalianao raha ratsy toetra ny vadinao. Mety mila mila elanelana kely ianao hanaovana izany. Tsy ho ela dia hiposaka ny toe-tsaina ary hiverina amin'ny laoniny ny fiainana. Handalo koa ity!
Ny olona mora tezitra dia mety mandalo fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainany, indrindra raha tsy mahazatra ny toe-tsaina. Mety ho reraka ny marary, marary, miahiahy, na tsy faly . Raha izany, raha vantany vao voavaha ny fotony, dia mety hihena ny toe-po. Mety mila fotsiny ny vadinao nihaino ary manohana. Na izany aza, raha mazàna ny vadinao ary tsy dia misy antony loatra, dia mety misy antony hafa ihany.
Tadidio fa raha mbola mila izany ianao maneho fangorahana manoloana ny mpiara-miasa aminao, zava-dehibe koa ny fihetseham-ponao. Raha mpampijaly olona ny vadinao dia tsy azonao atao ny mamela azy ireo hararaotina. Ampiasao ireto torohevitra enina ireto hamaritana ny fomba fiasa tsara indrindra amin'ny toe-javatra tsy manam-paharoa miaraka amin'ny vadinao.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hitantanana ny fiovan'ny toetran'ny namanao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
tsy manana toerana eto amin'ity tontolo ity aho
tiako ianao fa ianao t
ny tahotra ny tsy lavo-pitia
milaza amin'ny sakaizanao fa tianao izy
omena tsiny aho amin'ny zava-drehetra eo amin'ny fifandraisako